ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏စျေးနှုန်း - Worldwide Church of God Switzerland
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2019-01 > နိုငျငံတျော၏စျေးနှုန်း
မာကုကျမ်းပိုဒ်များ 10,17-31 gehören zu einem Abschnitt, der von Markus9bis 10 reicht. Diesem Abschnitt könnte man die Überschrift «Der hohe Preis des Reiches Gottes» geben. Er beschreibt die Zeitspanne kurz vor dem Ende des Lebens Jesu auf Erden.
ယေရှုသည်ကတိထားရာမေရှိယဖြစ်ကြောင်းပေတရုနှင့်အခြားတပည့်တော်များကစတင်သိနားလည်လာကြသည်။ သို့တိုင်သခင်ယေရှုသည် ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုခံရမည့်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံစားရမည့်မေရှိယဖြစ်ကြောင်းသူတို့နားမလည်သေးပါ။ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကမည်မျှကုန်ကျသည်ကိုသူတို့နားမလည်ကြပါ။ ၎င်းသည်သူ၏ဘုရင့်ဘုရင်အဖြစ်မိမိအသက်ကိုပေးရာ၌ယေရှုပေးဆပ်ရသည့်အဖိုးအခဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာသူတို့သည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်တွင်နိုင်ငံသားများဖြစ်လာရန်ယေရှု၏တပည့်များအနေနှင့်မည်မျှစွန့်လွှတ်ရမည်ကိုသူတို့နားမလည်ပါ။
ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သို့ကျွန်ုပ်တို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ပုံကိုမဟုတ်ဘဲသူ၏တော် ၀ င်ဘ ၀ တွင်ယေရှုနှင့်မျှဝေခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ကိုဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်လမ်းစဉ်နှင့်အညီဖြစ်စေခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းအတွက်ပေးရမည့်စျေးနှုန်းနှင့်မာကုသည်ဤအပိုင်းတွင်ယေရှု၏အရည်အသွေးခြောက်ခုကိုဖော်ပြခြင်းဖြင့်ဆုတောင်းခြင်းကိုမှီခိုခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုငြင်းပယ်ခြင်း၊ သစ္စာရှိခြင်း၊ ရက်ရောခြင်း၊ နှိမ့်ချခြင်းနှင့်စွဲမြဲသောယုံကြည်ခြင်းကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စရိုက်လက္ခဏာခြောက်မျိုးစလုံးကိုကြည့်ပြီးစတုတ္ထဖြစ်သောအထူးသဖြင့်ရက်ရောမှုကိုအထူးဂရုပြုကြသည်။
ပထမဆုံး Markus ကိုသွားပါ။ 9,14-32. ယေရှုသည် အရာနှစ်ရပ်ကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်- တစ်ဖက်တွင်၊ တစ်ဖက်တွင်၊ ပညတ်တရားဆရာများနှင့် တွေ့ကြုံနေရသော ခုခံမှုဖြစ်ပြီး တစ်ဖက်တွင်၊ လူများစွာနှင့် သူ၏တပည့်များကြားတွင် ကိုယ်တော်မြင်ရသည်မှာ မယုံကြည်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဤအပိုင်းရှိသင်ခန်းစာမှာ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၏အောင်ပွဲသည် (ဤအခြေအနေတွင် ရောဂါကျော်သည်) သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအဆင့်ပေါ်တွင်မမူတည်သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် သခင်ယေရှုသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား မျှဝေပေးသည့်ယုံကြည်ခြင်းအဆင့်တွင်ဖြစ်သည်။
ဤအားနည်းချက်ရှိသောပတ်ဝန်းကျင်၌ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏ကုန်ကျစရိတ်မှာမှီခိုနေသည့်စိတ်ထားဖြင့်ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းပြချက်ကဘာလဲ အကြောင်းမှာသူသည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အတွက်အပြည့်အ ၀ ပေးဆပ်ရသောကြောင့်မကြာမီကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ၏အသက်ကိုစွန့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, တပည့်သေးနားလည်ကြဘူး။
Markus တွင် ဆက်သွားပါ။ 9,33-50၊ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော် ကုန်ကျစရိတ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် ကြီးစိုးမှုနှင့် တန်ခိုးကို စွန့်လွှတ်လိုသော စိတ်ဆန္ဒကို စွန့်လွှတ်ရန်ဖြစ်ကြောင်း တပည့်များအား ပြသခဲ့သည်။ မိမိကိုယ်ကို ငြင်းပယ်ခြင်းသည် အားနည်း၍ အားကိုးရာမဲ့ကလေးများကို ရည်ညွှန်း၍ ယေရှု စံနမူနာပြထားသည့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် ကြီးမြတ်စေသည့် နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ယေရှု၏တပည့်တော်များသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုလုံးဝငြင်းပယ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ၊ ထို့ကြောင့်ဤတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်သည်စုံလင်သူတစ် ဦး တည်းသာယေရှုအားညွှန်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့ကိုယုံကြည်ရန်သူ၏လူကိုလက်ခံရန်နှင့်သူ၏ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်မှသူ၏ဘဝလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ရန်ခေါ်ခြင်းခံရသည်။ ယေရှုနောက်သို့လိုက်ခြင်းသည်အကြီးမြတ်ဆုံးသို့မဟုတ်အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ လူများကိုအစေခံခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုအစေခံရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငြင်းပယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Markus တွင် 10,116 တွင် ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်၏ ကြီးကြီးမားမားကုန်ကျစရိတ်သည် အနီးကပ်ဆုံးဆက်ဆံရေးတွင် သစ္စာရှိခြင်းပါ၀င်ကြောင်းပြသရန် အိမ်ထောင်ရေးကို ယေရှုအသုံးပြုပုံကို ဖော်ပြသည်။ ထို့နောက် ယေရှုသည် အပြစ်မဲ့ကလေးငယ်များအား အပြုသဘောဆောင်သောပုံသက်သေများ မည်သို့ချမှတ်ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာပြောပြသည်။ ကလေးတစ်ဦး၏ ရိုးရှင်းသောယုံကြည်ခြင်း (ယုံကြည်မှု) ဖြင့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို လက်ခံရရှိသူများသာလျှင် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့် သက်ဆိုင်သည်ဟူသည့်အရာကို အမှန်တကယ်ခံစားရသည်။
သခင်ယေရှုပြန်ကြွတော်မူသောအခါလူတယောက်ပြေးလာပြီးဒူးထောက်လျက်ရှေ့တော်၌ဒူးထောက်လျက်၊ ကောင်းမြတ်သောသခင်၊ ထာဝရအသက်ရရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ငါ့ကိုအဘယ်ကြောင့်ခေါ်တော်မူသနည်း။ ဘုရားသခင်တပါးတည်းသာကောင်းမြတ်တော်မူ၏။ သင်သည်ပညတ်တော်တို့ကိုသိသည်။ သတ်ဖြတ်မှုမပြုရ၊ သူ့မယားကိုမပြစ်မှားရ၊ မခိုးသင့်၊ မမှန်သောပြောဆိုမှုများကိုမပြုလုပ်သင့်၊ မည်သူ့ကိုမျှမရှုတ်ချသင့်၊ သခင်၊ ထိုပညတ်ရှိသမျှတို့ကိုအကျွန်ုပ်သည်ငယ်သောအရွယ် မှစ၍ စောင့်ရှောက်ပါပြီဟုလျှောက်ပြန်လျှင်၊ ယေရှုသည်ထိုသူကိုကြည့်ရှု။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်နှင့်ငုံ့ကြည့်တော်မူ၏။ သူက“ တစ်စုံတစ်ခုပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်သည်။ သွားလော့။ သင်ပိုင်ဆိုင်သမျှကိုရောင်းပြီးဆင်းရဲသားများကိုပေးဆပ်ပါ။ သင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဘဏ္treာကိုရလိမ့်မည်။ ပြီးတော့ငါ့နောက်သို့လိုက်နှင့်! ထိုသူသည်များစွာသောဥစ္စာကိုရတတ်သောသူ ဖြစ်၍၊ ထိုစကားကိုကြားလျှင်စိတ်မသာသည်နှင့်သွားလေ၏။
ယေရှုသည် မိမိ၏တပည့်များကို တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ကြည့်ရှုပြီး “ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရန် များပြားလှသောလူများအတွက် မည်မျှခက်ခဲပါသနည်း။ တပည့်တော်တို့သည် စကားတော်ကြောင့် တွေဝေခြင်းရှိ၍၊ ယေရှုကလည်း၊ သားသမီးတို့၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရန် မည်မျှခက်ခဲပါသနည်း။ ကုလားအုတ်တစ်ကောင်သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်ရန် သူဌေးတစ်ဦးထက် အပ်တစ်ချောင်း၏မျက်လုံးကို ဖြတ်ကျော်နိုင်ခြေ ပိုများသည်။ သူတို့က ပိုလို့တောင် ကြောက်သွားတယ်။ သို့ဖြစ်လျှင် အဘယ်သူသည် ကယ်တင်နိုင်မည်နည်း။ ယေရှုသည် သူ့ကိုကြည့်ကာ၊ လူသားတွင်မဖြစ်နိုင်သော်လည်း ဘုရားသခင်နှင့်မဆိုင်။ ဘုရားသခင်အတွက် ဘာမဆို ဖြစ်နိုင်တယ်။ ထိုအခါ ပေတရုက ယေရှုအား၊ ငါတို့သည် အရာရာကို ချန်ထားခဲ့၍ သင်တို့နောက်သို့ လိုက်ကြသည်ကို သိတော်မူ၏။ ယေရှုက၊ ငါဆိုသည်ကား၊ အိမ်မှထွက်၍ ညီအစ်ကို၊ နှမ၊ အမိ၊ အဘ၊ သားသမီး၊ လယ်ကွက်တို့ကိုစွန့်၍ ဧဝံဂေလိတရားကို ထောက်၍ ခပ်သိမ်းသောအမှုတို့ကို အဆတစ်ရာပြန်ရ၏။ ယခု ဤအချိန်၌၊ အိမ်များ၊ ညီအစ်ကို၊ ညီအစ်မများ၊ မိခင်များ၊ သားသမီးများနှင့် လယ်ကွင်းများ- နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံနေရသော်လည်း- နောင်လာမည့်ကမ္ဘာတွင် ထာဝရအသက်။ ယခုမူကား ရှေ့ဦးစွာသောသူအများတို့သည် နောက်ဆုံးဖြစ် ကြလိမ့်မည်။” (မာကု၊ 10,17-31 NGÜ)။
ဤတွင်ယေရှုကဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ရှင်းလင်းလာသည်။ သခင်ယေရှုဘက်သို့လှည့်လာသောသူဌေးသည်အရာအားလုံးမှလွဲပြီးတကယ်အရေးကြီးသည့်အရာများပိုင်ဆိုင်သည်။ ထာဝရအသက် (ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၌အသက်) ။ သူသည်ဤဘဝကိုလက်ခံချင်သော်လည်းမြင့်မားသောစျေးနှုန်းကိုပိုင်ဆိုင်လိုခြင်းမရှိပေ။ မျောက်တွေရဲ့ထောင်ချောက်ထဲကသူ့လက်ကိုဆွဲမထုတ်နိုင်တဲ့မျောက်တစ်ကောင်ရဲ့နာမည်ကြီးဇာတ်လမ်းမှာဒီအတိုင်းဘဲ၊ သူကသူ့လက်ထဲကအရာတွေကိုလက်မလွှတ်ဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတာကြောင့်၊ ထို့ကြောင့်သူဌေးသည်ရုပ်ပစ္စည်းကြွယ်ဝမှုအပေါ်သူ၏တည်နေရာမှခွဲထွက်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ။
သူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းချစ်ဖို့ကောင်းပြီးစိတ်ထက်သန်ပေမယ့် သူသည်ယေရှုနောက်သို့လိုက်လျှင်ထာဝရအခြေအနေ (သူပေးသော) အခြေအနေအရသူဌေးသည်သူ့အတွက် (သူပေးသောအခြေအနေ) ကိုရင်ဆိုင်ရန်ပျက်ကွက်မည်မှာသေချာသည်။ ဒါကြောင့်သူဌေးကဝမ်းနည်းစွာနဲ့ယေရှုကိုစွန့်သွားပြီးသူ့ဆီကနေငါတို့မကြားရတော့ဘူး။ အနည်းဆုံးတော့သူသည်သူ့ရွေးချယ်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သခင်ယေရှုကထိုသူ၏အခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သူဌေးသည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သို့ ၀ င်ရောက်ရန်အလွန်ခက်ခဲကြောင်းတပည့်တော်များအားပြောကြားခဲ့သည်။ အမှန်မှာ၊ ဘုရားသခင့်အကူအညီမပါဘဲလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ! အထူးသဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်ယေရှုကရယ်စရာကောင်းတဲ့ပုံဥပမာကိုသုံးပြီးကုလားအုတ်ဟာအပ်ရဲ့မျက်လုံးကိုဖြတ်သန်းရတယ်။
ယေရှုကလည်းဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သောဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများနှင့်အခြားယဇ်များကိုငွေပေးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပေးဆပ်ရလိမ့်မည်၊ ဒါပေမယ့်မြေကြီးပေါ်၌မဟုတ်ဘဲကောင်းကင်၌သာရှိသည်။ များများပေးလေငါတို့ပိုရလေဘဲ။ သို့သော်ကျန်းမာရေးနှင့်ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုသတင်းကောင်းကိုဟောသောအချို့အုပ်စုများကသင်ကြားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင့်အမှုတော်အတွက်လှူဒါန်းသောငွေများထက်များစွာပိုရလိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။
ယေရှုသွန်သင်ပေးသောအရာသည်အောက်ပါလိုအပ်ချက်များနှင့်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုများပါ ၀ င်သော်လည်း၊ ယေရှု၏နိုင်ငံတော်၌ (ယခုနှင့်အနာဂတ်၌) ၀ ိညာဉ်ဆုလာဘ်များသည်လွန်စွာလွန်ကဲကြောင်းဆိုလိုသည်။
ဤလိုအပ်ချက်များကိုပြောနေစဉ်တွင်ယေရှုသည်လာမည့်ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုအသေးစိတ်ကျသောနောက်ထပ်ကြေငြာချက်တစ်ခုကိုထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။
"Sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem; Jesus ging voran. Unruhe hatte die Jünger ergriffen, und auch die anderen, die mitgingen, hatten Angst. Er nahm die Zwölf noch einmal beiseite und kündigte ihnen an, was mit ihm geschehen werde. "Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf, sagte er. »Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und der Schriftgelehrten gegeben. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und schliesslich töten. Doch drei Tage danach wird er auferstehen" (Markus 10,32-34 NGÜ)။
သခင်ယေရှု၏အပြုအမူနှင့်သူ၏စကားများ၌တပည့်တော်များကိုအံ့အားသင့်စေပြီးသူတို့နောက်လိုက်သောလူအုပ်ကိုကြောက်ရွံ့စေသည်။ တစ်နည်းနည်းနဲ့သူတို့ကအကျပ်အတည်းတစ်ခုဖြစ်လုနီးပြီဟုခံစားရသည်။ သခင်ယေရှု၏စကားများသည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အတွက်အမြင့်ဆုံးစျေးကိုမည်သူပေးဆပ်ရကြောင်းကိုသတိကြီးစွာဖြင့်သတိပေးနေခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အတွက်လည်းသခင်ယေရှုပေးသည်။ ဒါကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ သူသည်အရက်ရောဆုံးဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားသူ၏ရက်ရောမှု၌ပါဝင်ရန်သူ့နောက်သို့လိုက်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခံရသည်။ ယေရှုကဲ့သို့ရက်ရောမှုမှကျွန်ုပ်တို့ကိုအဘယ်အရာကတားဆီးနေသနည်း။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းသင့်သောအရာဖြစ်သည်။
Im Abschnitt über die hohen Kosten des Reiches Gottes kommen wir zu Markus 10,35-45. ဇေဗေဒဲ၏သား ယာကုပ်နှင့် ယောဟန်သည် သူ၏နိုင်ငံတော်၌ မြင့်မြတ်သောရာထူးကို တောင်းရန် ယေရှုထံသွား၍၊ သူတို့တွေ အရမ်းစည်ကားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဗဟိုပြုတယ်လို့ ယုံရခက်ပါတယ်။ သို့သော်၊ ထိုသို့သောသဘောထားများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကျဆုံးသွားသော လူ့သဘောသဘာဝတွင် နက်ရှိုင်းစွာ အမြစ်တွယ်နေကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ တပည့်နှစ်ယောက်သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်တွင် ဤမျှမြင့်မားသောရာထူး၏ကုန်ကျစရိတ်အမှန်ကို သိရှိပါက၊ သူတို့သည် ယေရှုထံ ဤတောင်းဆိုမှုကို ဝံ့ဝံ့မည်မဟုတ်ပေ။ ဆင်းရဲဒုက္ခခံရမည်ကို ယေရှုသတိပေးခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်၊ ဤအရာက လူတိုင်းကို ဒုက္ခခံကြရသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၌ မြင့်မြတ်သောရာထူးကို ယူဆောင်လာမည်ဟု မဆိုလိုပါ။ မြင့်မြတ်သောရာထူးဆုသည် ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာ ပိုင်ဆိုင်သည်။
ဂျိမ်းစ်နှင့်ယောဟန်တို့ကဲ့သို့ကိုယ်ကျိုးရှာလိုသောအခြားတပည့်များသည်သူတို့၏တောင်းဆိုချက်ကိုမကျေနပ်ကြချေ။ ဖြစ်ကောင်းပါဝါနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာ၏ဤရာထူးကိုလည်းလိုချင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောတန်ဖိုးကိုနှိမ့်ချစွာအစေခံခြင်း၌စစ်မှန်သောကြီးမြတ်မှုကိုပြသသည့်အခါယေရှုသူတို့ကိုစိတ်ရှည်စွာရှင်းပြသည်။
ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်သည်ဤနှိမ့်ချမှု၏အဓိကစံနမူနာရှင်ဖြစ်သည်။ သူသည်ဟေရှာယ ၅၃ တွင်ပရောဖက်ပြုထားသည့်အတိုင်းဆင်းရဲဒုက္ခခံနေရသောဘုရားသခင်၏ကျေးကျွန်တစ် ဦး အနေနှင့်သူ၏အသက်တာကို“ များစွာသောသူတို့အတွက်ရွေးနုတ်ဖိုး” အဖြစ်ပေးဆက်ခဲ့သည်။
တစ်ခုအနေနှင့်၎င်းသည်လူ့ယုံကြည်ခြင်း၌သင်ခန်းစာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မစုံလင်သော်လည်းမွဲမွဲတည်မြဲသည့်အခါထိရောက်သည်။ နောက်ဆုံး၌သခင်ယေရှု၏တည်မြဲသောစုံလင်သောယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။
သစ္စာရှိမှု၊ ရက်ရောမှု၊ နှိမ့်ချခြင်းနှင့်စွဲမြဲသောယုံကြည်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဤအရည်အသွေးများကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံပြီးကျင့်သုံးသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုတွေ့ကြုံခံစားကြရသည်။ ဒါကနည်းနည်းကြောက်စရာကောင်းသလား။ ဟုတ်ပါသည်၊ ထိုအရာများသည်သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်၏အရည်အသွေးများဖြစ်ကြောင်း၊ သူသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သူ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားသူနှင့်ယုံကြည်ကိုးစားသူများကိုဝေမျှပေးသောအရည်အသွေးများဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိမှီတိုင်အောင်
သခင်ယေရှု၏နိုင်ငံတော်၌ကျွန်ုပ်တို့ပါဝင်ခြင်းသည်ဘယ်သောအခါမျှပြီးမြောက်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ယေရှုနောက်သို့လိုက်သောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကို“ သယ်ဆောင်သွားသည်” ။ ဒါကခရစ်ယာန်တပည့်များ၏နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၌ဝင်ငွေရရန်မဟုတ်ပါ၊ ယေရှု၌ထိုနေရာရှိသည်။ ဘုရားသခင့်မျက်နှာသာတော်ရရန်မဟုတ်ပါ၊ ယေရှုအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏မျက်နှာသာတော်ရရှိသည်။ သခင်ယေရှု၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အသက်တာ၌ကျွန်ုပ်တို့ပါဝင်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သူသည်ဤအရည်အသွေးများအားလုံးနှင့်ပြည့်စုံစွာပိုင်ဆိုင်ထားပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုသူနှင့်အတူမျှဝေရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။ ၎င်းသည်သူသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အမှုတော်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ယေရှု၏နောက်လိုက်များ၊ ချစ်လှစွာသောမိတ်ဆွေများနှင့်စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ယေရှုကိုဖွင့်ပြပါ။ ထိုသူ၏နောက်သို့ လိုက်၍ အထံတော်မှခံယူကြလော့။ နိုင်ငံတော်တော်၏ပြည့်စုံခြင်းသို့၎င်း၊